Sat, Aug 18, 2018 | 02:14:23 NST
​कविता र छोरी बिम्ब कविता संग्रह प्रकाशित
काठमाडौं, असोज २७ –कविता र छोरी विम्वमा केन्द्रित भएर नेपालभाषामा कविता व म्हयाय् कविता संग्रह प्रकाशित भएको छ ।
काठमाडौं, असोज २६ – भारतको देहरादुनमा नेपाल–भारत सद्भावना कवि गोष्ठी भएको छ । गोरखाली सुधारसभा देहरादुन र शैल ग्रामीण विकास समिति देहरादुनको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नेपाल तथा भारतका गरी २५ जना कविको सहभागिता थियो ।
काठमाडौं, असोज २५ – नेपाली सांगीतिक तथा सांस्कृतिक विषयवस्तु समेटिएको वृत्तचित्र ‘घाटुसरी’ युरोपका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन हुने भएको छ ।
दसैँमा धेरै खाएर यिनीहरुले चुपचाप हल्ला गरेका हुन् कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर हल्ला भन्दा धेरै सल्लाह नै गरेर सगोलमा बस्न लागेको भन्दै ठूला वामहरु गमक्क छन् । साँच्चै सधैँका लागि सगोलमा बस्ने हो भने वामहरुले नाम र झण्डा नफेरी नहुने भएको छ ।
उपेन्द्रराज पाण्डेय/उज्यालो । काठमाडौं, असाेज २० – ‘संगीतमा नलागेको भए म त आत्महत्या गरिसक्थेँ,’ परिवारका धेरै सदस्यलाई गुमाउँदाका पीडाले गाणेश रसिकलाई विक्षिप्त नै बनाएको थियो । उनले हरेश खाइसकेका थिए । आफैले हुर्काएका तीन भाइलाई अकालमै गुमाउनुको पीडा त छँदै थियो, त्यसमाथि एकमात्र छोरालाई पनि सदाका लागि बिदाई गर्नुपर्दा को पो सम्हालिन सक्छ र ? २०४० सालमा ‘म पनि गायक बन्छु’ भन्ने रसिकका भाइ शम्मीले आत्महत्या गरे । २०५१ सालमा दसैँकै साइ...
'पद्मश्रीलाई 'सगरमाथाकाे गहिराइ' मन परेछ'
'पद्मश्री साहित्य पुरस्कार' मैले पाएको हैन, मैले कविता सुनाइरहेका युट्युबका भिडियोहरूले पनि पाएका हैनन्, 'सगरमाथाको गहिराई' नाम गरेको कविताको पुस्तकले पाएको हो ।
पद्मश्री साधना तथा साहित्य पुरस्कार वितरण
काठमाडौं, असोज १९ – पद्मश्री साधना तथा साहित्य सम्मान – २०७३ बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच वितरण गरिएको छ ।
काठमाडौँ, १८ असोज - सिन्धु इन्द्रावती परिवेशमा लेखिएको उपन्यास ‘देउती’माथि विमर्श गरिएको छ ।
एसएलसीको मार्कसिटमा मेरो तीन/चार ओटा विषयमा आलु नम्बर आएको थियो
२०२३ सालमा दिएको पहिलो एसएलसी गुल्टाभाइटकै करामतले गुल्टाइदियो । तर, अर्को साल मेहनत गरेर पढ्छु र पास भएरै छाड्छु भनेर खुबै मेहनत गरेर गुल्टाभाइट खाँदै नखाई ध्यान दिएर पढें । दोहोर्‍याएर हिसाबको ट्युसन पढेकाले उक्त विषयमा अलिअलि बलियो नै भइसकेको थिएँ ।
भुइयाँका स–साना कथा
विक्रम संवत् १८७१—१८७३ को नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि नेपालले ठूलो भूभाग गुमायो । यसको तीस वर्षपछि नेपालको सत्तामा जंगबहादुर राणाको उदय भयो । हतियार र षड्यन्त्रको शक्तिले जन्मिएको आफ्नो सत्ता टिकाउन उनले देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुसँग सन्तुलन मिलाउने उपाय अवलम्बन गरेका थिए ।
एक त आफ्नो जातै वीर, दोस्रो वीरबहादुरको झनाति, तेस्रो नामै मेरो वीरबल पाँडे – अब म कत्रो वीर हुँला भन्नै पर्दैन ! त्यसमाथि पनि नेपालको नाइटैबाट जन्मेको कान्तिपुरेकाजी भनेपछि त कुरै खलास ।
हार्पर ली : जसलाई एउटै पुस्तकले चर्चाको शिखरमा पुर्‍यायो
“साहित्यिक बजारमा म कुनै दयालु समिक्षकको हातबाट मृत घोषित हुनेछु” हार्पर लीले एक अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन् । सन् १९६० को दशकमा बेष्टसेलर दरिएको र अहिलेसम्म करिब ४ करोड प्रति बिक्री भएको ‘टू किल ए मकिङ्ग बर्ड’ उपन्यासकी लेखिका हार्पर ली लाई आफू प्रसिद्ध हुन्छु भन्ने आत्मविश्वास थिएन ।
मुटुरोग दिवस विशेष (चेतनामुलक गीत)
कोरोनरी मुटुरोग अनि स्ट्रोकबाट बच्न जीवनशैली अपनाउँ लौ झम्केगुलेली सागपात खाई बाँचौ खुशि भई नाचौँ मुटु दिवश मनाउँ लौ झम्केगुलेली
यो दसैँका लागि १० पुस्तक
दसैँको विदामा तपाईँ घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ ? दसैँमा आफ्नै योजना बनाउनुभएको छ होला । लामो यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ ? तपाईँलाई पुस्तकहरु त मन पर्छ होला नै । हामीले केही पुस्तकहरु तपाईँलाई सिफारिस गरेका छौँ ।
‘नेतालाई मस्ति यात्रुलाई सास्ति : झम्के गुलेली’
सबैर गाडी पहिरोमा परि, राजमार्गमा जाम भन है झम्केगुलेली ।। हिउँदै लाग्दा जेसुकै भन, बर्खाहै लाग्दा ‘राम’ भन है झम्केगुलेली ।।
शमी साहित्य सम्मान शर्मा र पराजुलीलाई
काठमाडौँ, असोज ६ - शमी साहित्य प्रतिष्ठानले यस वर्षको ‘शमी साहित्य साधना सम्मान’ समालोचकद्वय प्रा गोपीकृष्ण शर्मा र प्रा ठाकुर पराजुलीलाई संयुक्तरुपमा प्रदान गरेको छ । सम्मानको राशि रु एक लाख १०१ छ ।
​प्रोल्लास सिन्धुलीयले ल्याए ‘जन्मजात बाहुनको विज्ञप्ति’
काठमाडौँ, असोज १ – कवि प्रोल्लास सिन्धुलीयको कविता संग्रह ‘जन्मजात बाहुनको विज्ञप्ति’ शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच सार्वजनिक गरिएको छ ।
​‘अब यो घोडचढी नाच कसले नाचिदिन्छ ?’
काठमाडौं, भदौ ३१ – ‘अब यो घोडचढी नाच कसले नाचिदिन्छ ? जसको मन छ, उ जान्दैन । जो गर्न सक्छ उ मान्दै मान्दैन ।’ तराईको चमार समुदायमा प्रचलित रहेको चम्खोली बाजा र घोडचढी नाच लोप हुँदै गएको सेरोफेरोमा आधारित नाटक ‘घोडचढी’ को एउटा संवाद हो यो ।
के को अधिकार ? कस्तो अधिकार ? भन्देखिनलाई तपैंले जे सोध्यो, त्यही भन्नुपर्छ भन्ने कहाँ लेख्या छ भन्देखिनलाई । तपैंले सोधेको भन्न नचाहनु मेरो पनि अधिकार । भयो ?
वाङमय शताब्दी पुरुष जोशीको विशेष सम्मान : रथ यात्रा र नागिरक अभिनन्दन
काठमाडौं, भदौ ३० – वरिष्ठ संस्कृतिविद् तथा वाङमय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीलाई शुक्रबार विशेष कार्यक्रमका साथ नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ ।
कास्की, भदाै २५ - देवकोटा लु सुन एकेडेमी नेपालद्वारा आयोजित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय काव्य संगम–२०७४ एक समारोहका बीच शनिबार पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
अरुणा लामाको जन्मजयन्ती आज मनाईंदै
काठमाडौं, भदौ २४ – स्वर सम्राज्ञी अरुणा लामाको जन्मजयन्ती शनिबार मनाईंदैछ । सुमधुर स्वरकी धनी अरूणा स्वर किन्नरीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ ।
पहिलो पटक खस भाषाको वर्ण विन्यास मस्यौदा तयार
नेत्र शाही/उज्यालो । जुम्ला, भदौ २१ – नेपाली भाषाको उदगम स्थल सिंजा लगायत बृहत जुम्लामा बोलीचालीमा आउने मातृभाषा जुम्ली खस भाषाको पहिलो पटक वर्ण विन्यास मस्यौदा तयार भएको छ ।
श्रीमतीलाई दुख्न कम भएको बेला अलिअलि लेख्दै तयार भयो ‘महको म’
काठमाडौं, भदौ २० – ‘श्रीमती दुखाईले छटपटिएको बेला कसरी लेख्न सक्थेँ र ? उनलाई दुख्न कम भएको बेला एकदुई लाइन एकदुई लाइन गरेर लेखेँ ।’
यज्ञशको ‘भुइँया’ सार्वजनिक
काठमाडौं, भदौ १९ – पत्रकार यज्ञशको नयाँ कृति ‘भुइयाँ’ को विमोचन भएको छ । आइतबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बिच नेपाल मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारी र आख्यानकार कुमार नगरकोटीले संयुक्त रुपमा पुस्तक विमोचन गरे ।
कुमार नगरकोटीको संस्मरण ‘दोचा’ सार्वजनिक
काठमाडौं, भदौ १७ – साहित्यकार कुमार नगरकोटीको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘दोचा’ शनिबार एक कार्यक्रमका बिच सार्वजनिक भएको छ ।
२०४६ वैशाखमा सत्र नेपाली अर्बपतिको सूची सार्वजनिक भएको थियो । त्यसमा पञ्चायती राजनीतिका दुई हस्ती थिए— नगेन्द्रप्रसाद रिजाल र पशुपतिशमशेर राणा ।
महेश पौड्यालको ‘त्यसपछि फुलेन गोदावरी’ सार्वजनिक
काठमाडौं, भदौ १६ – साहित्यकार महेश पौड्यालको कथासङ्ग्रह ‘त्यसपछि फुलेन गोदावरी’ सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच प्रा.डा. अभि सुवेदी, प्राज्ञ मातृका पोखरेल, प्रा.डा. अम्मराज जोशी, डा. नवराज लम्साल, कुमारी लामालगायतले संयुक्त रुपमा पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको हो ।
यस वर्षको पद्मश्री पुरस्कार सगरमाथाको गहिराइले जित्यो
काठमाडौं, भदौ १५ – यसवर्षको पद्मश्री पुरस्कार नवराज पराजुलीको कविता संग्रह सगरमाथाको गहिराइले पाउने भएको छ । खेमलाल हरिकला लामिछाने प्रतिष्ठान, चितवनले उत्कृष्ट पाँचमा परेका मध्येबाट सगरमाथाको गहिराईलाई पद्यमश्री पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने निर्णय गरेको प्रतिष्ठानका संरक्षक जीवा लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकार रिजालको उपन्यास ‘दृष्टिभ्रम’ सार्वजनिक
काठमाडौं, भदौ १३ – पत्रकार तथा साहित्यकार कमल रिजालको उपन्यास ‘दृष्टिभ्रम’ को सोमबार एक कार्यक्रमका बीच लोकार्पण भएको छ । काठमाडौंमा आयोजित सार्वजनिकीकरण एवम् अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उपन्यासको विमोचन गरिएको हो ।
दल, दरबार, अदालत र अख्तियारभित्रका भ्रष्टाचार थापाकाे ‘रजगज’ मा
काठमाडौं, भदौ १३ – नेपालका राजनीतिक दल, अदालत र अख्तियारभित्र हुने गरेका भ्रष्टाचारको फेहरिस्त समेटिएको पुस्तक ‘रजगज’ मंगलबार सार्वजनिक भएको छ ।
नेपाल भाषाका कविताको अंग्रेजी संस्करण ‘दी रीबेल मरनिङ्ग’ प्रकाशित
काठमाडौं, भदौ १३ – मौलिक रुपमा नेपाल भाषामा लेखिएका कविताहरुको अंग्रेजी संग्रह ‘दी रीबेल मरनिङ्ग’ प्रकाशित भएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाल भाषामा लेखिएका कविताहरुको अंग्रेजी संग्रह प्रकाशन गरेको हो ।
यस वर्षको मदन पुरस्कार कँडेलको ‘धृतराष्ट्र’ लाई, जगदम्बा पुरस्कार कार्टुनिस्ट वात्सायनलाई
काठमाडौं, भदौ ११ – यस बर्षको मदन पुरस्कार घनश्याम कँडेललाई दिइने भएको छ । उहाँको ‘धृतराष्ट्र’ पुस्तकलाई यस वर्षको मदन पुरस्कार दिने निर्णय भएको मदन पुरस्कार गुठीले जनाएको छ
​गुरुङको पाठशाला बजारमा
काठमाडौं, भदौ ११ – लामो समयदेखि नेपथ्यमा रहेका पोखरेली साहित्यकार तीर्थ गुरुङ उपन्यासमार्फत् साहित्य बजारमा आएका छन् ।
रोल्पाबाट युएई पुगेका उदिराम भन्छन : मयुरले उडाएर नौ देश पुर्‍यायाे
‘मयुरले उडाएर नौ देश पुर्‍यायाे । लेखेको हुने रैछ देखेको नहुने, युएईमा भएको एक कार्यक्रममा मयुर बनेर नाचेका रोल्पाका उदीराम खड्काले भन्नुभयो । गुल्मी सेवा समाज युएईले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उदीराम मयुर बनेर मयुर झै छमछम नाच्दा उपस्थित सात सय भन्दा धेरै दर्शक पनि उहाँसँगै नाचे ।
काठमाडौँ, भदौ १० - साहित्यकार प्रा रामप्रसाद दाहालद्वारा लिखित ‘युरोपको यात्रा अक्षरको खेती’ नामक कृति सार्वजनिक भएको छ ।
मभित्र पनि समयले छोडेर गएका चोट र दागहरू छन्, दुख्ने मुटु छ, निराशा र एक्लोपनको तितो अनुभव छ, दुर्भाग्यको छाया छ, घातप्रतिघातको फेहरिस्त छ । कुरो यत्ति हो, खासै गीत गाएर हिँडिनँ ।